Isbedelada Muhiimka ah ee Aad Ugu Baahan Tahay Inaad Ku Sameyso Shirkaaga Sannadlaha ah ee Iibinta | Martech Zone
Isbedelada Muhiimka ah ee Aad Ugu Baahan Tahay Inaad Ku Sameyso Shirkaaga Sannadlaha ah ee Iibinta
Arbacada, Nofeembar 15, 2017 Ashley Welch
Waxay noqoneysaa inay ahaato in Waqtiga sanadka mar labaad, marka Hogaamiyaasha Iibka iyo Iibinta ay qorsheynayaan shirarkooda sanadlaha ah ee iibka. Ma aha hawl yar. Marka lagu daro saadka aasaasiga ah ee xulashada goobta, qolalka la xirayo iyo helitaanka goobta kulanka, waxaa jira cadaadis aan la sheegin oo ku saabsan kor u qaadista shirkii sanadkii hore. Sideen uga dhigi karnaa ka sii weynaan iyo ka sii wanaagsan? Muxuu ku hadlayaa martida dhiirigelin doonta? Abaalmarino noocee ah ayaa macnaheedu noqon doonaa kuwa ugu waxqabadka fiican?
Waan helnay. Waxaan kaqeyb galnay inbadan oo kamid ah nafteena shaqooyinkeena, waxaanan ka caawinaa macaamiisheena inay hirgeliyaan laadadka kooxahooda adoo weydiinaya: Kawaran haddii aad ka qorshaysay kulankaaga aragtida macmiilka? Waa kuwan shan fikradood oo macaamiisha udub dhexaad u ah oo aad isku dayi karto inaad ka dhigto kulanka sannadka dambe kan ugu wanaagsan weli:
Qorshaynta Xisaabta Istiraatiijiga ah. Markaan ka fikirno Xisaabaadka Istiraatiijiga ah, waxaan u jeednaa inaan ka fikirno xisaabaadkayaga ugu sarreeya, macaamiisha inta badan naga iibsada. Shirka bilowga, waqtiga badanaa waxaa loo qoondeeyaa in dib loo eego waxa badeecadaha iyo adeegyada dheeraadka ah la iibin karo si loo kordhiyo dakhliga loona sii adkeeyo iskaashiga. Tani waa shaqo muhiim ah, laakiin si dhakhso leh ayey u noqon kartaa mid aan caadi ahayn-aniga, aniga, annaga. Alaabtayada, adeegyadayada, khadkayaga hoose. Dib u habeynta? Dib uga fikir qofka aad u aragto inuu yahay xisaabaadkaaga istaraatiijiga ah marka la eego Xadgudubyo iyo Meelo Muhiim ah. Macaamiishaada guud waxay noqon karaan xisaabaadkaas waaweyn ee iibsada kuna raaxeysta tiro aad u badan oo ah alaabadaada iyo adeegyadaada. Laakiin sidoo kale waa inaad tixgelisaa inaad ku darto qaar ka mid ah macaamiishaada xad dhaafka ah: macaamiilkee ayaa waxyaabaha ugu xiisaha badan ku sameeya alaabadaada iyo adeegyadaada? Ku martiqaad inay ka mid noqdaan guddiga macaamiisha oo weydii inay ka hadlaan xisaabaadyadooda istiraatiijiyadeed.
Marti Ku Marti Macaamiisha Inay Aqoonsadaan Kuwa Waxqabadka Aad U Sareeya Ka Sameeya. Dadka wax iibiya si adag ayey u shaqeeyaan — dadkaaga iibka ahna kuwa ugu fiican ayaa si fudud uga go'doomi kara duurka. Sababahan iyo kuwo kale oo badan awgood, aad ayey muhiim u tahay in lagu aqoonsado kuwa waxqabad sameeyaaga ah asxaabta hortooda. Tixgeli inaad ku casuuntid macaamiishaada waxqabadka sare si ay uga hadlaan iyaga xitaa xiitaa iyaga abaalmarin. Waxay u badan tahay ammaanta ugu fiican ee kooxdaadu heli karto.
Cusbooneysiinta Dhiirrigelinta ee Xaaladaha La Xiriira. Waxaan badanaa ka maqalnaa macaamiisheenna inay rabaan inay dhiirrigeliyaan. Macaamiisha waxay rabaan inay la shaqeeyaan xirfadlayaal iibiya dhiirigelin leh oo ka caawin kara iyaga inay fekeraan banaanka sanduuqa. Halkani waa meesha analogyadu ka yimaadaan. Si aad ula soo baxdid analog weyn, waxoogaa ka tarjun arrin gaar ah oo meheraddaadu ay isku dayeyso inay ka gudubto. Kadib, tixgeli duruufaha gebi ahaanba ka duwan halkaasoo dadku ku ogaadeen hab lagu xalliyo isla dhibaatadaas. Waa tan tusaale:
Hal koox oo aan la shaqeynay uma maleyneynin inay si ku filan ula xiriiraan macaamiishooda. Waxay dareemeen inta badan shaqada u suurta gelisay guusha macaamiishooda inay ka dhacaan daaha gadaashiisa, taas oo keentay luminta dhiirrigelin kooxeed. Analogga: Kulankan kooxdan waxaa lagu qabtay magaalada New Orleans, sidaa darteed waxaan u qaadnay inay booqdaan mid ka mid ah maqaayadaha caanka ah ee Emeril Lagasse. In badan oo la mid ah kooxdan, cunto kariyeyaasha iyo sous kuugga ayaa ka dambeeya goobta, haddana waa shaqadooda in macaamiisha ay ugu dambeyn ku raaxeystaan. Kooxda waxay waqti la qaateen Kuugga Fulinta, dhowr kariyeyaal sous ah iyo Maareeyaha Guud oo ka wareysanayay khibradooda. Natiija ahaan, waxay bilaabeen inay ka fekeraan si ka duwan sidii ay ula macaamil badan ula yeelan lahaayeen macaamiishooda oo ay dhiirrigelin ugu sii jiri lahaayeen.
Cusbooneysiinta Alaabta iyo Suuqgeynta. Waxaan jecel nahay inaan sooxirno farqiga udhaxeeya shirkadaada iyo macaamiishaada, iyo sidoo kale inta udhaxeysa soosaarayaasha wax soo saarkaaga, kuwa ku suuq geynaya iyo kuwa wax iibinaya. Halkii aad ku casuumi lahayd suuq geyntaada iyo asxaabtaada si aad u soo dejiso waxa ugu dambeeya uguna weyn, ka codso inay warkooda la yimaadaan qalin qalin leh, oo isticmaal waqtiga laadadka si aad ugu xirto wax soo saarka, suuqgeynta, iyo dadka wax iibiya macaamiisha. Tani waxay si gaar ah ula shaqeysaa Talo # 1 – macaamiishaada Extreme iyo Mainstream. Ka fikir tan tijaabinta wadahadalka lala yeelanayo macaamiisha ee ku saabsan waxyaalaha cusub ee la bixiyo iyo ka helitaanka jawaab celinta waqtiga dhabta ah ee dadka ugu muhiimsan - kuwa iibsan doona.
Dhisida xirfada. Tilmaamkeenna ugu dambeeya wuxuu la xiriiraa dhisidda xirfad-yaqaannadaada xoog-iibsi. Dadka wax iibiya waxay had iyo jeer raadiyaan siyaabo ay ku xoojiyaan xirfadahooda, ku horumariyaan ciyaartooda kuna raaxaystaan ​​guul weyn. Marka la eego mawduuceena ku-saleysan macaamiisha, waxaan la wadaagi doonnaa layli jecel midkayaga:
Waxaan jecel nahay inaan u dirno dadka iibka meelaha ay ku raaxeystaan ​​sida ugu wanaagsan garoonka dhexdiisa! Xarumaha tafaariiqda cilmi baarista ee goobta aad ka bilaabaneyso. Raadi xarumaha tafaariiqda iskuday inaad kahesho lammaaneyaal qunyar-socod caadi ah oo hooseeya oo sarreeya. Tusaale ahaan, Toys R Us iyo Dhismo-Bear loogu talagalay alaabada carruurtu ku ciyaarto, Chevy iyo iibka Tesla ee baabuurta, iyo wixii la mid ah. Layligani waxaa ugu wanaagsan in lagu sameeyo laba-labo, shaqadana labada lamaane waa in ay booqdaan labadooda dukaan oo ay si taxaddar leh ugu fiirsadaan waxa kordhiya ama yareynaya ka-qaybgalka macaamiisha. Waxaan dammaanad ka qaadeynaa in kooxahaagu ay dib ugu soo laaban doonaan dhiirigelinta waxyaabaha cajiibka ah (iyo kuwa aadka u xun) ee ay soo mareen waxayna lahaan doonaan aragtiyo cusub oo ay ku dabaqi karaan xiriirkooda macaamiisha.
Inaad ka fikirto laadadkaaga xagga aragtida macmiilkaagu waxay fududayn kartaa oo dhiirrigelin kartaa qorshahaaga laadadka waxayna kuu horseedi kartaa natiijooyin wax-soo-saar leh iyo sannad guul leh. Waxaan kugu dhiirrigelinaynaa inaad ruxdo laaddaada dambe oo aad isku daydo fikradahan inaad ka dhigto macaamiishaada midig halka ay ka tirsan yihiin: xarunta wax walba.
Tags: kulanka iibka sanadlaha ahlaadadlaad-kulancusbooneysiinta suuqgeyntaCusbooneysiinta alaabadaiibinta laadadkashirarka iibkawaxqabadka iibkaqorshaynta iibkatababarka iibkaqorshaynta xisaabta istiraatiijiga ahiibiyaasha ugu sareeya
Ashley Welch iyo Justin Jones ayaa isla aasaasay Hal-abuurka Somersault, Shirkad la talinta Naqshadeynta Naqshadeynta oo bixisa habab gaar ah oo ku saabsan horumarinta iibka. Iyagu waa qorayaasha Iibka Qaawan: Sida Fikirka Naqshaduhu u muujiyo ujeeddooyinka Macaamiisha iyo Dakhliga Wadista. Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan booqo, www.somersaultinnovation.com.